15 ม.ค. 2563 - 16:35 น.
နှလုံးကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ အတွက် မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော ကျဆင်းစေတဲ့ဆေးကို ၁ နှစ် ၂ ကြိမ်ထိုးပေးမယ့်စနစ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးဌာနက စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါတော့မယ်။ အင်္ဂလန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန NHS ဟာ ဒီစနစ်ကို ပထမဆုံးစတင်မယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော အဆီကျစေတဲ့ စတက်တင်ဆေးပြားကို လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ နေ့စဉ်သောက်သုံးနေကြပါတယ်။
အခုတော့ စတက်တင်ဆေးပြားအစား အင်ကလစ်ဆရင် ဆိုတဲ့ ထိုးဆေးကို ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာနက စတင်စမ်းသပ် ထိုးခဲ့ပါပြီ။
အခုတီထွင်လိုက်တဲ့စနစ်သစ်ကြောင့် နောက်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ လူပေါင်း ၃ သောင်းရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး မက်တ်ဟန်းကော့ကဆိုပါတယ်။
ကိုလက်စထရောဟာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အဆီခဲပါ။ အသည်းက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကိုလက်စထရောဟာ သွေးကြောတွေရဲ့နံရံမှာတွယ်ကပ်နေပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် သွေးကြောတွေ ကျဉ်းမြောင်းပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ဝဒနာ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
အင်ကလစ်ဆရင်ဆေးဟာ PCSK9 ဆိုတဲ့မျိုးဗီဇကို ဆွံ့အသွားအောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဲသလိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် အသည်းဟာ သွေးကြောထဲရှိ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကို စုပ်ယူချေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျိုးဗီဇဆွံ့အဆေးကို အင်္ဂလန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန NHS ကပထမဆုံး အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တာကတော့ သားစဉ်မြေးဆက်မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ဖယောင်းတည်ရောဂါခေါ် အမီလွိုက်ဒိုးဆစ် ပရိုတိန်း အနည်ကျရောဂါကို ကုသဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပနှလုံးရောဂါသုတေသနအဖွဲ့ European Society of Cardiology ရဲ့မနှစ်က စမ်းသပ်ချက်အရ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကိုလက်စထရောကို တဝက်လောက်ကျဆင်းသွားအောင် အင်ကလစ်ဆရင်က စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အလားအလာကောင်းတခုပါပဲလို့ စမ်းသပ်မှုကို ဦးဆောင်တဲ့ လန်ဒန် အင်ပီရီရယ်လ် ကောလိပ်က ပါမောက္ခ ကော့စကီရေးကဆိုပါတယ်။
နှစ်စဉ်လူနာပေါင်း ၃ သိန်းကို ကုသပေးရာမှာ ၅၅၀၀၀ ကိုနှလုံးရောဂါအရေးပေါ်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ လေဖြတ်မှု အန္တရာယ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးဌာန Department of Health and Social Care ကဆိုပါတယ်။
နှလုံးရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေ heart attack တခါမှ မဖြစ်ဖူးသေးသလို လေလည်း တခါမှ မဖြတ်ဖူးသေးပေမယ့် အဲသလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ ရှိတဲ့သူတွေကို နောက်တခါ ဆေးစမ်းသပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ထိုးပေးဖို့ရှိပါတယ်။
အဲဒီနောက်တခါ စမ်းသပ်မှုမှာ ပါဝင်ခွင့်ရသူဟာ လူပေါင်း ၄ သောင်းလောက်ရှိပါမယ်။
နှစ်စဉ်ထိုးသွားရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို ပထမအကြိမ် စမ်းသပ်သူတွေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် စမ်းသပ်သူတွေရဲ့ ရလဒ်တွေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး အကဲဖြတ်ပါမယ်။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ရလဒ်ကို အင်္ဂလန်အတွင်းမှာပဲ ကနဦးကြေညာပါမယ်။ အခုကျန်းမာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အင်္ဂလန်အတွင်းမှာ စတင်ခဲ့တာမို့ အင်္ဂလန်အတွင်းမှာပဲ အရင်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လူနာတွေမှာ စတက်တင်ပေးထားပေမယ့် ကိုလက်စထရောအဆင့်က သိပ်မြင့်နေသေးပြီး အန္တရာယ် မကင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လူနာတဝက်လောက်မှာ စတက်တင်ဟာ သိပ်မထိရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။
စတက်တင်က အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တချို့လူနာတွေဟာ သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ စတက်တင်ကို မသုံးမိဘဲ လွဲချော်နေတာတွေရှိသလို၊ တချို့လူနာတွေမှာတော့ စတက်တင် တနေ့တလုံးသောက်ဖို့ရာ ခဏခဏ မေ့နေတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
အခုကနဦးစမ်းသပ်ချက်တွေအရ စတက်တင်နဲ့ အင်ကလစ်ဆရင်ကို နှစ်မျိုးလုံးတပြိုင်တည်း တွဲသုံးလို့လည်း ရတာတွေ့ရပါတယ်။
အင်ကလစ်ဆရင်ကို ဥရောပ ဆေးဝါးအေဂျင်စီ European Medicines Agency နဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန Food and Drug Administration တို့ရဲ့ စစ်ဆေး အတည်ပြုချက် မလုပ်ရသေးပေမယ့် လူနာတွေကို စမ်းသပ် ကုသကြည့်တဲ့အခါ ဆန်းသစ်ကောင်းမွန်တာ၊ ဘေးကင်းတာ၊ စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာကတော့ ဝမ်းသာစရာသတင်းပါပဲ လို့ဒန်ဒီးတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ဂျက်ကော့ဂျော့က ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကြေညာချက်ပါပဲ။ လူနာတွေရဲ့ ဆေးဝါးသောက်သုံးပုံကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ အင်္ဂလန်ကျန်းမာရေးဌာနတို့ကိုလည်း ဒီလိုအမျိုးအစား ဆေးဝါးသုတေသနတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့ရှေ့တန်းခေါင်းဆောင်နေရာပို့ပေးပါလိမ့်မယ်လို့လည်း အင်္ဂလန်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ နှလုံးရောဂါကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ရီယတ်ဇ် ပေ့တဲလ်က ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ခြောက်လတခါထိုးရမယ့် ကိုလက်စထရောချဆေး